Omume asaa nke ngwa 7 nke ọma Web Ngwa | Martech Zone
Omume asaa nke ngwa 7 nke ọma
Monday, October 30, 2006 Wednesday, October 8, 2014 Douglas Karr
Dion Hinchcliffe dere ezigbo edemede na Ajax Developers Journal, lee ihe ọkacha mmasị m:
Ihe Di Mkpa nke Leveraging Web 2.0
Ala nke iji bụ ihe kachasị mkpa maka ebe nrụọrụ weebụ, ngwa weebụ, ma ọ bụ mmemme ọ bụla.
Mepee data gị ka o kwere mee. Enweghị ọdịnihu na ịchekwa data, naanị ịchịkwa ya.
Jiri obi ike tinye nzaghachi loops na ihe niile. Wepụ ihe odide ndị na-adịghị ka ihe dị mkpa ma mesie ndị na-arụpụta nsonaazụ ike.
Na-aga n'ihu ịhapụ ntọhapụ. Nnukwu ntọhapụ ahụ, otú ahụ ka ọ na-abụ ihe a na-ejighị n'aka (ihe ndị ọzọ na-adabere na ya, atụmatụ ndị ọzọ, na-agbaghasị.)
Mee ka ndị ọrụ gị bụrụ akụkụ nke ngwanrọ gị. Ha bụ ụzọ gị kacha baa uru nke ọdịnaya, nzaghachi, na agụụ. Malite ịghọta mmekọrịta ọha na eze. Nyefee njikwa na-enweghị isi. Ma ọ bụ ndị ọrụ gị nwere ike ịga ebe ọzọ.
Tụgharịa gị ngwa n'ime nyiwe. Ngwa a na-ejikarị otu ejiri akara aka, a na-ahapụta ikpo okwu iji bụrụ ntọala nke ihe ka ibu. Kama ịnweta otu ụdị ojiji site na ngwanrọ na data gị, ị nwere ike ịbụ otu narị otu narị ma ọ bụ puku.
Emela ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya ka ị nweta ha. Ha abụghị ihe ndepụta. Mana nye ndị ọrụ sitere n'ike mmụọ nsọ ike ka ha kee ha.
Aga m agbakwunye otu ihe, ma ọ bụ gbasaa 'Udo Nji'. N'ime ojiji iji ihe abuo:
Ojiji - usoro nke onye ọrụ na-ewe iji rụọ ọrụ kwesịrị ịbụ ihe okike ma ghara ịchọ ọzụzụ oke.
Nnukwu imewe - Achọghị m ịnakwere nke a, mana usoro pụrụ iche ga-enyere aka. Ọ bụrụ na ị nwere ngwa n'efu, ikekwe ọ bụghị dị mkpa; ma ọ bụrụ na ị na-ere ọrụ, mgbe ahụ ọ bụ atụmanya inwe ọmarịcha eserese na nhazi peeji.
Tụgharịa gị ngwa n'ime nyiwe na-aga n'ihu ntọhapụ cycles ma ibinye onwe ha 'wijetị, ngwa mgbakwunye, ma ọ bụ tinye-na' technology. Ọ bụrụ na enwere otu ụzọ ị ga-esi wuo akụkụ nke ngwa gị nke na-enye ndị ọzọ ohere ịba n'ime ya, ị ga-ebido mmepe gafere mgbidi ụlọ ọrụ gị.
Amaghị m na m kwenyere na 'Mepee data gị' mana ekwenyere m na itinye data gị. Mepee data n'oge a nwere ike ịbụ ihe nro nzuzo; Agbanyeghị, itinye data ndị ọrụ gị n’ọrụ bụ atụmanya. Ọ bụrụ na m jụọ m otú kọfị m si amasị m, enwere m olileanya na oge ọzọ m ga-enweta kọfị, ọ bụ ụzọ m si amasị ya! Ọ bụrụ na ọ bụghị, ajụla m na nke mbụ!
Tags: developmentn'elu ikpo okwu2.0 web
Douglas Karr Monday, October 30, 2006 Wednesday, October 8, 2014
ileghara anya? Izu mbụ m kwagara MacBook Pro
News na-eru uju… akụkọ ọjọọ ọzọ maka akwụkwọ akụkọ